Laascaanood (Radiolaascaanood)- Waxaa noo suura gashay in aanu waraysi la yeelano Garaad Saleebaan Garaad Max'med oo kamid ah Garaadada Deegaanada Sool ,Sanaag iyo Cayn, kuwooda Ugu magaca weyn, waxaanuna wax ka weydiinay arrimaha Maanta ka aloosan deegaanadaasi.
Su'aashii ugu Horaysay ee aanu waydiinayna waxay ahayd:
AllPuntland: Garaad sidee u aragtaan hawlgalada ay Ciidamada Booliska ee Puntland Ka fulinayaan Magalada Laascaanood?
Garaad Saleebaan:- Bismillaahi raxmaani raxiim Adeer Si wanaagsan ayey Ciidamada Booliska ee Puntland wax u qabteen,Hawlgal wanaagsan ayey sameeyeen, guryo 13sano lagu jiray ayey baneeyeen, sida guri ay lahaayeen dumarka iyo caruurtu, oo mudadaas dadkii degenaa wax ka saara la waayey, Guryihii kale ee dawlada oo aanay cidina sheegan karina way ka saareen, hawlgal aad u fiicana ayuu ahaa.
AllPuntland: Bulsha deegaanku sidee ayey u soo dhaweeyeen halgalkan?
Garaad Saleebaan:- Adigu dadku waa badan yahay ,waana dad u jeedooyin badan leh ayaa ku dhex jira,hasa yeeshee dadweynahu 100% sifiican ayey u soo dhaweeyeen, oo aad u diirana wayna ku farxeen hawlaha ay ciidamadu qabteen.
AllPuntland: Garaad dhawaan waxaa jiray in baarlamaanka maamulka Soomaaliland uu soo saaray, go'aan ogolaanaya in Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn La weeraro, isla markaana lagu soo xidho xuduudii lixdankii wixii ka horeeyey,sidee Garaad adigu u aragtaa Go'aankaas.
Garaad Saleebaan:- Annagu garan mayno xuduudaha ay leeyihiin halla soo xidho, xuduuduhu way badan yihiin , dadweynaha dhulbahantaha iyo wixii la halmaalaa waxay aaminsan yihiin in xuduudkoodu yahay meesha lagu magacaabo labiyada(labi gaatama), waxaana halkaa ka muuqdain uu jiro Khilaaf, Baarlamaanka Somaliland kama uu fiirsan go'aankaas uu soo saaray,hadalkaasina daw aniga ilama ah, dadka iyo dalkuna nabad galyuu u baahan yahay ee maaha in uu maamulka somaaliland colaad huriyo. oo cidina cid ma qabsan karto, cidina cid kuma duuli karto, cidii soo duusha uunbaa qaladka iyo daandaansiga leh.
AllPuntland: Dhawaan maamulka Riyaale Hogaamiyo waxay keeneen tuulada Oog Ciidan ay sheegeen in ay doonayaan in uu hawlgal ka fuliyo magaalada Laascaanood ,sidee u aragtaa ciidanka halkaas la soo dhoobay?
Garaad Saleebaan:- Ciidankaas waxaanu u aragnaa qalad iyo gardaro qaawan, loo mana baahna in uu maamulka Riyaale Colaad Huriyo ,ciidamadaasna waxaanu u aragnaa ciidamo duulaan ah, cidii nagu soo duushana waxaanu u arkaynaa qalad iyo daandaansi, Rayigayaguna wuxuu yahay in ciidankaas la celiyo, Deegaanada iyo dadka dariska ahina , dagaal iyo colaad uma baahna ee nabadgalyuu u baahan yahay, dagaalkuna xal makeeno, isku dhac iyo dhibaato uun buu keenayaa, iyo is nicid, dadka deegaan wadaagta ah ee wada daaqaya uun buu dhibaato u keenayaa.
AllPuntland: Garaad waxaa jirta warqad dhawaan warbaahinta loo gudbiyey, oo sida la sheegay ay Isimo deegaanka qarkood kaga codsanayeen taliyaha Ciidanka Booliska Puntland in uu degaankan ka baxo, maxaad arrintaas ka ogtihiin?
Garaad Saleebaan: Anigu wax allaale iyo wax aan ka ogahay ma jiraan, kuwaa la sheegayana warkooda mahayo, dunidana waxaa rogay Garaadoow, Garaad matahay, dad badan oo aan laga fiirsan ayaa arlada rogay, marka annigu lamana socdo , mani ogi warqadaas.
AllPuntland: Marka Garaad adigu ma waxaad leedahay Hawlgalka ay ciidamada Boolisku Dalka ka wadaan waanu taageersanahay?
Garaad Saleebaan:- Haa waayo shacabka deegaanku aad ayey u taageersan yihiin, qofna rayigii la qaadan maayee, waxaa la fiirinayaa dadweynaha intooda badan oo aad u taageersan in ay Ciidamada Puntland hawlgalada ay deegaanka ka wadaan, sii balaadhiyaan.
AllPuntland: Garaad waxaa baryahan danbe jira Isimo ama Mas'uuliyiin deegankan u dhashay, oo marka la weydiiyo Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ma Puntland mise waa Soomaliland , ay qaarkood tilmaamaan in uu gobolkani Somaliland yahay, adigu Garaad sidee arrintaas u aragtaa?
Garaad Saleebaan:- Adeer aniga Rayigayga waxaan u aqaan in Gobolladaasi ay yihiin Puntland, dhulka Soomaaliyana waa tii uu dagaal ka dhacay, dawladiina ay burburtay, dadkiina qabyaalad ayuu u kala kacay, barigii dhaweyd ee aanu tagnay shirkii Soomaalida ee ka socday Nairobi, dadka waxaa lagu xaadirinayey Daarood Hawiye, Dir IYO Digil iyo Mirifle, dhulkana qabyaaladaas ayaa ka dhacday iyadoon cidna la colaadin, dadka deegaankani tolkii ka hadhimaayo.
AllPuntland:- Garaad Ugu danbayntii maxaad soo jeedin lahayd?
Garaad Saleebaan:- Waxaan Riyaale Kula talin lahaa iyo odayaasha garanaya dhibaatada, dagaal xal ma noqdo, dhamaanteena Soomaali ayeynu nahay, in nabad galyada lagu dadaalo, oo amaanka la sugo, oo aan dagaal lahurin , oo dadkaa walaalaha ah ee biyaha wada cabaya colaad lagu abuurin, waxaanuna Riyaale u sheegaynaa in aanan annagu dagaal wadin, isagana waxaanu leenahay ciidamadaada xiryahoodii ku celi, miiska wadahadalkana ogolow in aad fadhisatid, taas oo sii fududaynaysa in ay dadku sidoodii hore isu dhexmaraan oo uu ganacsigu u socdo iyo is dhexmarku.